Sida loo Dallaga Video la Avidemux
Abuurka oo video ah, si ay u soo diiradda gal dhinacyada muhiim ah oo meesha laga saaro qeybo ka mid Ngcuka oo ah goobta, waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu qiimaha badan la heli karaa si ay u editor video ah. Waxaa loo isticmaali karaa sida ku xusan si loo hubiyo in daawadayaasha ay diiradda waxa muhiim ah, laakiin sidoo kale in ay weyneeyo walxaha shaashadda, sida la footage ee dabiiciga ah. Waxay leedahay isticmaalo badan, iyo mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan ee la heli karo lana siii video waa barnaamij lacag la'aan ah Avidemux. Halkan waxaan doonayaa in aan maraan habka loo maro Avidemux socda ku saabsan habka iyo beerista qaar ka mid ah video.
Waxaad ka heli kartaa halkan Avidemux u download , waxa loo heli karaa tiro balaadhan oo ah dhufto, kaliya download version ku haboon baahidaada. Marka bixi, rakibi hab caadiga ah aad madal, tani waa version Wndows (64bit).
Mid ka mid ah hal dhibic ka mid ah note marka rakibaadda waa in aad dooran kartaa qeybo ka mid ah barnaamijka aad rabto inaad si loo soo dajiyo. Waa raad aad u yar iyo waxqabadka ugu fiican waa xikmad badan in si fudud loo soo dajiyo wax walba.
Marka lagu rakibay aad loo soo bandhigi doonaa barnaamijka sida halkan ku arkay.
2. Keenista Video
Tallaabada xigta ayaa la soo degida video. Tan waxaa la samayn karaa laba siyood, adigoo gujinaya icon folder faylka ugu sareysa tagay aad furto browser caadiga ah file dedeg, dooro aad file video doortay, ama haddii kale si fudud aad jiidi karaan video galay guddiga ugu weyn ee ay u dajiyaan .
Kaan wadada aad qaadato, waxaad la kulmi doonaa la file video aad ku raran yihiin in sidan oo kale.
Hadda waxaad edit karaa video sida aad u baahan tahay, Avidemux ku jira xoolo ka mid ah muuqaalada si ay awood spectrum buuxda ee hawlaha tafatirka in la dhameystiro. Si kastaba ha ahaatee, halkan waxaan doonayaa in aan eegto qalab abuurka ah, si on tallaabada xigta.
3. ayeey Video
Avidemux leeyahay qaar ka qabsoomay marka la eego hawlgalka, mid ka mid ah kuwa ay tahay in si ay u awoodaan inay ka bedel kasta oo video, waa inaad doorataa qaab wax soo saarka aad. Ha inkastoo welwelin, Arrintaasna waa u Fududahay, isticmaal uun dropdown ee dhinaca wax soo saarka si ay u doortaan qaab aad rabto in aad sida halkan lagu arki karaa.
Marka lagu wadaa in aad tahay lacag la'aan ah si ay u bilaabaan sixiddiisa aad footage.
Waxaa muhiim ah in la fahmo sida habka tafatirka ee ka shaqeeya Avidemux, wax walba waa la heli via filtarrada menu Video> Safeeyaha oo halkan aad waajahdo interface cusub oo awood aad ku dooran qayb aad rabto in aad isticmaasho.
Doorashada 'Dalag' ka menu oo ku cidhiidhinaya astaanta lagu daray cagaaran hoose shaqeysiin qalab dalagga oo aad soo bandhigaysaa la weli aragti kale oo kuu ogolaanaya inaad si ay ula qabsadaan dalagga dhadhanka aad.
5. gacanta ku abuurka
Waxaa jira laba hab for abuurka, waxaad isticmaali kartaa feature dalagga Auto ah, taas oo lagu ogaan doonaa wax khadadka madow iyo noola footage u dhexeeya iyaga, ama haddii aad isticmaalayso qalab dalagga ee wax kale, ama aad rabtid in ay gacanta ku sameeyo, waxaad samayn kartaa dhigay dalagga via ka tagay sanduuqyada xaq sare iyo hoose. Qiimayaasha halkan aqbasho waa tirada pixels ka laayeen in dalagga fidiyaa, sida aad u dhacna, tani waxaa la soo bandhigay block cagaaran tuso meesha ay wax ka image ah in laga saari doonaa.
Waxaad bedelno tan si madax banaan u dhan 4 geesaha sida aad rabto.
Marka aad ku faraxsan tahay dalagga yihiin, waxaad riix OK oo dib aad qaadanayso in menu yaqaan filter aad u isticmaali karto waxyaalo kale oo dheeraad ah si ay u qabtaan tafatirka haddii aad u baahan tahay.
6. Lacag dalagga
Mid ka mid ah qodobada ugu badan ee wareer la Avidemux yimaado markan, sida aad video eegi doonaa uusan ka duwaneyn markii aad bilowday, oo dad badan u qabaa oo waxay sameeyeen wax qalad ah, laakiin tani waa qayb kale oo aalada Avidemux. Safeeyayaashani waxay kaliya la codsan karaa marka video la reencoded, oo aad samayn in faylka dhex> badbaadin menu.
This Doorashada soo bandhigaysaa wadahadal dhoofinta yaqaan ah oo kuu ogolaanaya in aad doorato magaca iyo caga of faylka. Marka lagu sameeyo aad riix OK iyo waxaad arki doontaa Avidemux baaraandegidda aad file oo dib-u-haya'ad sanduuqa wadahadal this.
Mudo intee leeg ayay qaadataa waxay ku xirnaan doontaa ah arrimo dhawr, sida waxyeellooyin badan oo kale ayaa lagu daray, sida ay u soomi processor ah your computer uu leeyahay, iyo sida waaweyn iyo waxa xalka video yahay. Qaabka sidoo kale qayb door ah in geeddi-aad, iyada oo qaar ka mid ah qaabab qaadato waqti yar encode ka badan kuwa kale. Marka aad dhamayso, waxaad arki kartaa video iyo arko dalagga talaabo.
Sida aynu ka arki kartaa, in kastoo ay jiraan dhowr dhinacyada kala duwan ee aalada wixii wax yar unintuitive, lana siii video in Avidemux waa hab sahlan in qof kasta dhammayn karo waxoogaa dulqaadasho.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ah in la xusuusto oo la Avidemux waa in aad codsato dhan ah filtarrada ka hor dib-u-Deji, mar kale waa su'aal dulqaadasho iyo qayb ka mid ah ururka si loo hubiyo in wax walba oo aad rabto inaad samayso waxa lagu dhamaystiraa si.
Avidemux waa gabal weyn ee software, waxaa ka maqan polish ah ee qaar ka mid ah oo ay ganacsi dabcan, laakiin ka dambeeya interface mararka qaar clunky jiro kala duwan oo aad u ballaaran oo ka mid ah muuqaalada in laguu ogolaado in aad ku dhammayn badan ama ka yar hawl kasta oo tafatir laga yaabaa in aad rabto in aad. In la eego barnaamijyada free ku saabsan yahay sida ugu fiican ee uu helo, oo wax soo saarka uu yahay, shaki la'aan, tayo weyn. Qof kasta oo raadinaya xal free dhibaatooyin video tafatir, iyo kuwa wax kama qaba nidaamka waxbarashada Avidemux siisaa qalab waxtar ah.
Haddii Avidemux waxaa aad u adkayn, waxaad ka fiirsan kartaa Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor), kaas oo ah qalab si sahlan loo isticmaalo video tafatirka in noola videos dhowr click gudahood. Download dhabar jab ku free version maxkamad.
> Resource > Video > Sida loo Dallaga Video ah oo la Avidemux